University Of Dnipropetrovsk Alfred Nobel - Study in Ukraine
University Of Dnipropetrovsk Alfred Nobel
Alfred Nobel University: kormeerka ayaa cadeeyay waafaqsan nidaamka maaraynta tayada Jaamacadda shuruudaha ka mid ah heerarka caalamiga ah.
Sifada ugu weyn muhiim u ah tayada adeegyada waxbarashada ay bixiyaan Alfred Nobel University waa in kor loo qaado tartan ee ka qalin ee Ukraine iyo dibadda. Ujeedada this Jaamacadda fulisaa habka maareynta tayo leh oo ku salaysan caalamiga ah ISO caadiga ah 9001:2008.
Waa maxay astaamaha siiyey University ee abaalmarinta oo ka mid ah shahaadooyinka caalamiga ah iyo kuwa qaran oo tayo lehISO 9001:2008?
marka hore, ee koorsada of sal-dhigida ee nidaamka tayada a Alfred Nobel University ayaa ogaaday iman kara ee dhabbihii ka mid ah horumarinta joogto ah: geedi socodka ka dhaca jaamacadda ayaa gaaray hufnaan gaar ah oo sax.
Marka labaad, dalabaadka maanta jawi aad u tartan rasmi ah ka dhaqdhaqaaqa jaamacadda hormartay ah, dabacsanaanta, ah fahamka baahida macaamiisha ah ee adeegyada waxbarashada: nidaamka tayada ka caawisaa in this sida ay muujinaysaa halka ay suurto gal ah inay si fiican u noqon. Iyo ugu muhiimsan: jaamacada waxaa loogu talagalay xilalka hoggaamineed ee gobolka, dalka, in bulshada sayniska iyo waxbarashada caalamiga ah. Sidaa darteed, shahaadada tayada si ay u caawiyaan waxa fuulaya jaranjaradii guul iyo qaadan meeshiisii ​​loo eeliyaa ee ratings sare saameynta badan ee waxbarashada sare ee Ukraine iyo dunida.
Mar saddexaad, University ayaa heshay shahaadada, taas oo damaanad macaamiisha adeegyada waxbarasho ee soo socota: University - waa hay'ad waxbarasho si fiican u dheeli tiran iyo guulaha badan taas oo:
• Shaqaalaha tacliinta oofin karin shaqada heerka ugu sareeya;
• waajibaadka xirfadle ah si wanaagsan loo wadaago;
• hababka la xiriira adeegyada waxbarasho waxaa lagu sameeyaa si heer sare;
• waxaa jira tilmaamo hawl in ay diiwaan oo la heli karo si ay shaqaalaha;
• waxaa jira hab gacanta ku habka maareynta tayo leh in si fiican nidaamsan oo la hayo si.
m TheOST muhiim ah, Jaamacadda waxaa loogu talagalay hoggaanka gobolka, dalka ee bulshada sayniska iyo waxbarashada caalamiga ah. Sidaa darteed, shahaadada waafaqsan ISO heerka caalamiga ah 9001:2008 waxaa riixo inay fuulaan jaranjaradii guul iyo qaadan meeshiisii ​​sharaf qiimeynta waxbarasho ee saameynta badan ee Ukraine iyo dibadda gudahood.
1. Jaamacadda waxa uu noqday awardee ee Ukraine tartanka Tayada Qaranka ee 17- 2012.
Jaamacadda ka qeyb qaatay National Ukraine tartanka markii ugu horeysay - qabtay by Association Tayada Yukreeniyaan iyo Yukreeniyaan Midowga warshadlaydu iyo Ganacsatada. Tartanka waxaa abaabulay oo taageero ka mid ah Golaha Wasiirada ee wasiirada ah ee Ukraine iyo Ururka Tayo Yurub gudahood Business Yukreeniyaan ee Marathon '' dabbaaldegaan in sare oo heer sare Yurub ku salaysan lagu daydo ee EFQM heer sare ».
Sidaas darteed, Dnepropetrovsk Alfred Nobel University ayaa noqotay awardee iyo shahaado ku jirta qeybta "Leadership helay aragti oo dhan, waxyoonay iyo daacadnimada. "Grand abaal marinta Xafladda waxaa lagu qabtay on November 13, 2012 at Rugta Ganacsiga inta lagu jiro Isbuuca Tayada Yurub ee Ukraine gudahood mashruuca caalamiga ah "Horumarka Joogtaysan: Dhaqaalaha-Deegaanka-Quality-Excellence. "
Qaab dhismeedka jaamacadda Dnipropetrovsk ee Alfred Nobel
Ingiriisi Philology iyo Waaxda Translation
The Department of Enterprise Dhaqaalaha iyo Ganacsiga Caalamiga ah
The Department of Cybernetics dhaqaalaha iyo teknoolajiyada macluumaadka
The Department of Management curinta iyo International Logistics
Department of Finance International, Accounting iyo Taxation
The Department of International Dalxiiska iyo Tababarka Luqadda
The Department of International Dhaqaalaha iyo Aragtida Dhaqaale
The Department of Waxbarasho iyo Psychology
The Department of Enterprise, Ganacsiga iyo Exchange Activity
The Department of Science Siyaasadda, Sociology iyo Humanities
The Department of Applied Luuqadaha iyo Hababka loo Teaching Languages ​​Dibadda
Post-Graduate iyo Doctoral Programs
Waaxda Badbaadada iyo Caafimaadka
Waaxda Suuq The
Xafiiska Caalamiga ah
Sayniska iyo Research Center of Dhaqaalaha iyo Horumarinta Bulshada
Xafiiska Dean ee
Waaxda diyaarinta The Ardayda Dibadda
Last update:23 Laga yaabaa 19